Muuqaal cusub oo Apple Shot ah oo ku saabsan iPhone, cinwaankiisu yahay "Ukun darsin ah" | IPhone news
Muuqaal cusub oo Apple Shot ah oo ku saabsan iPhone, cinwaankiisu yahay "A Dozen Eggs"
Ololaha fiidiyowga ee caanka ah ee Apple Shot ee iPhone ayaa lahaa muuqaal cusub dhowr saacadood, kiiskan oo cinwaankiisu yahay: "A Darsin Ukun." Muuqaalka cusub ee hadda lagu daabacay kanaalka Apple ee YouTube-ka waxaa sameeyay Michel Gondry, agaasime aflaamta Faransiiska oo caan ah Waxaa loo yaqaanaa jiheynta filimada sida: "Qorraxda daa'imka ah ee Maskaxda Spotless", "Be Kind Rewind," "Hooyada Cagaaran," iyo "Sayniska Hurdada" iyo kuwo kale.
Xaaladdan oo kale, waxay nooga muuqataa muuqaal cajiib ah oo xiiso leh maadaama uusan lahayn dood badan ama dareen badan, oo ka baxsan duubista ukumaha qaarkood ee ku dambeeya digaagga laftooda. Kani waa muuqaalka si rasmi ah loogu daabacay kanaalka Apple ee ku dhex jira ololaha Shot iPhone:
Sida iska cad ma aha lagama maarmaan in la xasuusto in jajabkan wax yar ka badan hal daqiiqo lagu duubay dhammaan iPhone 13. Xaaladdan oo kale iyo shakhsi ahaan waxaan jeclahay Shot kale ee ololaha iPhone laakiin tani waa horeba wax shakhsi ah. Maalmo ka hor waxaan daabacnay muuqaal cusub Ken utsumi in Si rasmi ah uma daabicin Apple laakiin anigu shakhsi ahaan ayaan ugu jeclaa Marka loo eego kan uu sameeyay Gondry, kaas oo uu ku tusay Kobe cajalado lagu sameeyay iPhone-ka cusub iyo diyaarad Drone ah oo Dji ah.
Si kastaba ha ahaatee, muuqaalkani waxa uu dheer yahay kuwa aan hore ugu aragnay kanaalka Apple ee lagu duubay moodooyinka cusub ee Apple iPhone. Fiidiyowyada noocaan ah ayaa hadhow shirkaddu u isticmaashaa ku xayeysiiso qalabkaaga warbaahinta bulshada iyo warbaahinta kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Terminalka IPhone » iPhone 13 » Muuqaal cusub oo Apple Shot ah oo ku saabsan iPhone, cinwaankiisu yahay "A Dozen Eggs"
Kahor Jimcaha Madoow heshiisyadan ku saabsan alaabta iyo agabka Apple
cusboonaysiinta WatchOS 8.1.1 ee isticmaalayaasha Apple Watch Series 7